Disk Lidka, saxanka Cadaadiska Lidka, Wareega Lidka Lidka - Hengyue
Saxanka Cadaadiska Lidka
430 MM 1878080035 Baabuurta ...
Gabar somali ah oo wasmo ...
T5189-14302 cagaf cagaf ...
430mm naxaas ku saleysan clu ...
Warshad tayo sare leh h ...
Shiinaha qaybo nin xajin ...
gaari xamuul ah oem disc ...
Qaybaha gawaarida gawaarida gawaarida ...
Gawaarida culus ee culus ...
Tayo sare leh firaaqada ...
Waajibaadka culus ee Mareykanka ...
Tayo sare leh clu gaari xamuul ...
Lidka Xamuulka Duty culus
Saxanka xajin loogu talagalay gawaarida culus, 7 daboolka guga, saxanka dhoobada xajinta dhoobada, Shiinaha warshad saxan xajin, Hebei, Shiinaha, hubinta tayada.
Gawaarida Gawaarida Xamuulka
Gawaarida Xamuulka culus ee looyaqaano 108925-82 (15-1 / 2 "x 2") Waxqabadka Sare ee Manual -Kuxir xirmada Lidka Loogu Tala Galay Gawaarida culus ee culus America
Cabbirka xajmigaani waa 350 * 10 * 51, Oo leh kuleyl iyo dusha daaweynta. Qalabka xajinta leh hoos u dhac yar, buuq la'aan, Nolol Adeeg Dheeraad ah.Waxaan horumarin karnaa qalabka xajinta sida ku habboon caadooyinka sawirrada iyo shaybaarada.
Gawaarida Gawaarida Gawaarida loogu talagalay Hino
Cabirka saxanka xajmiga ee gaari xamuul ah 31250-5241 waa 350 * 220 * 10, wuxuuna asal ahaan ka soo jeedaa warshadda xajinta ee Hebei, Shiinaha, oo leh baakado dhexdhexaad ah ama baakad midab nooc midabaysan leh loo qaabeeyey. Inta badan waxaa loo dhoofiyaa Yurub iyo Mareykanka, Aasiya iyo suuqa Bariga Dhexe, tayo sare iyo waxqabad wanaagsan.
Cangzhou Hengyue qaybo auto Co., Ltd. wuxuu ku yaalaa Hejian, Hebei, wuxuu kudhow yahay caasimada Beijing iyo dekedda Tianjin, gaadiidka waa mid aad ufiican. shirkad, waxay leedahay sannado badan oo waayo-aragnimo soo-saarista shirkii xajin. Wax soo saarka sanadlaha ah ee qalabka xajinta wax ka badan 100,000 nooc. Shirkaddu waxay leedahay noocyo kala duwan oo waaweyn oo dhex-dhexaad ah oo sameysma qalab sameynta, qalabka ka shaqeynta daaweynta kuleylka, iyo sidoo kale noocyo kala duwan oo qalabka caaryada ah iyo qalabka baaritaanka. Tayada badeecadu waa mid la isku halleyn karo, waxayna leedahay duug-celin, adkeysi heerkul sare iyo nolol dheer, iwm.
Qaybaha otomaatiga ee dib-u-warshadaynta suuq-geynta suuqa ...
Warbixintii ugu dambaysay ee ay bixisay Trusted Market “The 2021 global auto parts remanufacturing report market industry report based by key players, types, codsiyada, dalalka, cabirka suuqyada, iyo saadaasha ilaa 2027 ″, oo ay ku jiraan jawiga juquraafi ahaaneed iyo miisaanka warshadaha Iyo s a dhamaystiran .. .
Xizhuang Development Zone, Xingbieying Township, Hejian, Cangzhou City, Gobolka Hebei, Shiinaha